हामी नेपालीकाे बानी कहिले सुध्रिने, देशभित्र नियमै पालना नगर्ने नेपाली विदेश पुग्नासाथ पूरै अनुशासित हुन्छ ! – ताजा समाचार
यो शिक्षा र संस्कार हामीले घरमा, विद्यालयमा वा समाजमा पढाउन पाएकै छैनौँ । यदि कसैले यस्ता सामान्य नियमलाई पालना गर्यो भने उ कागको हुलमा बकुल्ला बन्दछ । नियम पालना गर्दा कार्टुन बनिन्छ । हुनु पर्ने यसको ठिक उल्टो हो । नियम नमान्ने, अनुसासनमा नबस्ने मानिस कार्टुन बन्नु पर्नेमा नियम मान्नेलाई उडाइन्छ । थाहा छ तर गरिदैन ।
सार्वजनिक स्थानमा नाक कान कोट्याउन नहुने सम्मको चेतना निकै पढेलेखेकाहरुमा समेत देखिदैन भने सिक्न र सिकाउन कहाँबाट शुरु गर्ने , पत्तो छैन । तर यत्ती सुनेपछी अलिकति भएपनी कन्सीयस भइदिए केही मासिनहरु भने पनि राम्रो हो । सार्वजनिक शौचालयहरुबाट साबुन,ट्वाइलेट पेपर मात्र होइन धाराको टुटी नै निकालेर लैजाने सम्मको हर्कत हुन्छ । ढोका, लिफ्ट वा बाटोमा पहिला आँफै जानु पर्ने, कहिल्यै अरुलाई यसो हाँसेर जानुस न भन्न नसक्ने, शायद विश्वमा अब हामी मात्रै बाँकी छौ कि । सामान्य अवस्थामा अरुलाई पहिला जान दिदा जम्मा २ सेकेटण्ड जति आँफुलाई ढिला हुने हो ।
सबैभन्दा ठुलो विजोग त कुनै रेष्टुराँमा खाना खाई सकेपछी देखिन्छ । खाना खाई सकेर जब विल तिर्ने बेला हुन्छ, ठ्याक्कै त्यती नै बेला सबलाई पिसाबले च्याप्छ, कि त फोन गर्नु पर्ने हुन्छ, कि त नदेखे जस्तो गरी फोन चलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ । कतिपय प्रोफेसनल बिल छल्नेवालाहरुको टाइमिङ नै तगडा । भाई विल पाउ त भनेको कति मिनेटमा विल आउँछ भन्ने हिसाव गरेरै पिसाब फेर्न तिर लाग्छन् । अनि केहीको बानी चाँही म दिउ भनेर यसो पछाडी पर्स तिर हात लगेजस्तो चाँही गर्ने तर तिर्ने नियत अनुहारमा चाँही नदेखिने । हुन्छ तपाई नै तिर्नुसन त भनियो भने एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्ला जस्तो एक्सप्रेशन । यत्रो नाटक किन गर्छौँ हामी ? सबैले मिलेर तिरे कसैलाई भार नै पर्दैन । त्यसमाथी कसले खुवाउने हो पहिले नै मेक स्योर गरेर गए टेन्सन नै हुँदैन र पैसा नुहुनेले आज म विलमा सहयोग गर्न सक्दीन है साथी हो भने भै त हाल्छ । यत्रो भागाभाग नाटक किन गर्छाैँ हामी ।
यस्ता केही सामान्य तर जरुरी कुरा हामीले सिक्नै पर्छ । कोही कोही चाँही फेरी म तिरौँ चाही भन्ने तर प्राण गए जीवनमा नतिर्ने खालका पनि हुन्छन् । हामी मध्ये धेरै त्यो नतिर्ने साथीको अनुपस्थीतीमा उसको बर्षौँ खुब कुरा काट्छौँ । वर्षौसम्म यो टेन्सन लिनु भन्दा तेस्रो पटकसम्म नतिर्दा सिधै आज तपाईले तिर्नु पर्ला भनिदिउ, प्रोबलम सल्भड । कहिलकाँही यस्तो हल्का कुरा पनि गर्नू पर्छ, कसो ?